တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်၅ခုမှ မြို့နယ်၂၂မြို့နယ်တွင် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းခံထားရ - Myanmar Pressphoto Agency
တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်၅ခုမှ မြို့နယ်၂၂မြို့နယ်တွင် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းခံထားရ
InternetShutDown MPA Myanmar News
News September 25, 2021 ·0Comment
စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းမှု ၈လကျော်ကြာမြင့်လာသည့်အချိန်တွင် တိုင်း၃တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်နှစ်ခုမှ မြို့နယ်၂၂မြို့နယ်တို့တွင် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်း ခံထားရသည်။
အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်း ခံထားရသည့်မြို့နယ်များသည် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေသော မြို့နယ်များဖြစ်ပြီး မြို့နယ်အချို့တွင် လုံးဝပြတ်တောက်နေကာအချို့မှာ မိုင်တဲ(Mytel)ဆင်းကဒ်ဖြင့် အင်တာနက်အသုံးပြု၍ ရနေကြောင်း ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်များထံမှ သိရှိရသည်။
“သူတို့ အဓိကဖြတ်တဲ့နေရာတွေ ကြည့်လိုက်ရင် စစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေ။ ဒီကောင်တွေ အကျအဆုံးများနေတဲ့နေရာတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါဟာ သူတို့ဘက်က စစ်ပြင်တဲ့သဘောလို့ ယူဆရင်လည်းရတယ်။ ပြောရင် ဖြတ်လေးဖြတ်လုပ်တဲ့သဘောပေါ့”ဟု စစ်ကိုင်းတိုင်းမှ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်သူ တော်လှန်ရေးသမားတစ်ဦး MPAသို့ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ကချင်ပြည်နယ်၌ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၌ ထန်တလန်၊ ဖလမ်း၊ တီးတိန်၊ မတူပီ၊ ကန်ပက်လက်၊ မင်းတပ်၊ တွန်းဇံ၊ ပလက်ဝမြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်း၌ ဂန့်ဂေါ၊မြိုင်၊ ထီးလင်း၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၌ အရာတော်၊ယင်းမာပင်၊ကနီ၊ပုလဲ၊ရေဦး၊တန့်ဆည်၊ဘုတလင်မြို့နယ်နှင့် မန္တလေးတိုင်း၌ မြင်းခြံ၊မိုးကုတ်မြို့နယ်တို့သည် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုကို ခံနေရခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်၅ခုတွင် ချင်းပြည်နယ်၌ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရမှု အများဆုံးဖြစ်ပြီး ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များနှင့် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့သည် နေရာအနှံ့အပြား၌ တိုက်ပွဲများ မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။
“ချင်းပြည်နယ် တပြည်နယ်လုံးကို ဖြတ်တောက်ထားတယ်ပြောလို့ရတယ်။ စစ်ကောင်စီရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားမထိခိုက်အောင်ဆိုပြီး ဟားခါးတမြို့ထဲကိုချန်ထားတယ်။ ကျန်တဲ့မြို့နယ်အကုန်လုံးကို ပိတ်ထားတဲ့သဘောပါ ” ဟု ချင်းဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်း ခံထားရသည့်မြို့နယ်များအနက် စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်းရှိ ကျေးရွာများသည် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ဝင်ရောက်စီးနင်းမှုကို မကြာခဏခံစားနေရသည်။ဝင်ရောက်စီးနင်းသည့်အပြင် ကျေးရွာကို မီးရှို့ခြင်းများ ပြုလုပ်သဖြင့် ဒေသခံအများအပြားသည် အိုးအိမ်စွန့်ခွာပြီး ထွက်ပြေးနေရလျက် ရှိသည်။
MPAအနေဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်များအရ ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားသော်လည်း မိုင်တဲဆင်းကဒ်အချို့သည် အင်တာနက်အသုံးပြု၍ရသေးကြောင်းနှင့် မြို့၏အချို့နေရာများတွင် အသုံးပြု၍ရနေကြောင်းသိရသည်။
အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားမှုများအတွက် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဇော်မင်းထွန်းနှင့် ဖုန်းအော်ပရေတာအသီးသီးထံသို့ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်းတုံပြန်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားသည့်နေရာများသည် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေသောနေရာများဖြစ်သည့်အတွက် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ဝင်ရောက်စီးနင်းမှုသတင်းများ ရရှိနိုင်ရန် ခက်ခဲသွားသည့်အပြင် ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လည်း အခက်အခဲများရှိလာကြောင်း ဒေသခံကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များထံမှ သိရသည်။
“အခုက ဆက်သွယ်ရေးအပိုင်းမှာ အရမ်းအခက်အခဲရောက်နေတယ်။ဘ ယ်လိုရောက်နေလည်းဆိုတော့ ထန်တလန်မှာဆိုရင် ရှိတဲ့ရွာတွေရဲ့ သတင်းတွေသိဖို့ အခက်အခဲရှိလာတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေကို နိုင်ငံခြားကနေ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းတာတွေရှိတဲ့အခါ အင်တာနက်မရှိတော့ အခက်အခဲတွေရှိနေတာပါ” ဟု Thantlang Placement Affairs Committee (TPAC) မှ တာဝန်ရှိသူကဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည် ၎င်းတို့ ထိုးစစ်ဆင်ရန်နှင့် တိုက်ပွဲများ အရှိန်မြှင်တင်ရန်အတွက် ဖြတ်လေးဖြတ်ဖြစ်သည့် ရိက္ခာလမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်ခြင်း အဆက်သွယ်ဖြတ်ခြင်း၊ လက်နက်လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးလမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
#အင်တာနက်ဖြတ်တောက် #အကြမ်းဖက်စစ်တပ် #MPA
Internet Cut Off in 22 Townships of Five States and Regions
After 8 months of taking power, the military has shut down the internet in 22 townships of three regions and two States.
The internet blackout townships are the ones where clashes are breaking out, but in some completely shut down areas, Mytel SIM cards still work for going online, according to residents.
“When we look at the shutdown areas, they are clash-ridden areas and where they (the military) have suffered great casualties. We could also assume that they are preparing for war, like the four-cut method,” said one anti-military dictatorship, revolution participant from Sagaing to MPA.
Currently, the internet is shut down in Hpakant twonship of Kachin State; Thantlang, Falam, Tedim, Matupi, Kanpetlet, Mindat, Tonzang and Paletwa townships of Chin State; Gangaw, Htilin, Taungdwingyi townships of Magway region; Ayadaw, Yinmar Pin, Kani, Pale, Yay Oo, Taze and Butalin tonwships of Sagaing region and Myingyan and Mogok townships of Mandalay region.
Among those states and regions, Chin State is the most shut down one and clashes have frequently broken out between the local defense forces and the terrorist military.
“Chin State is entirely cut off. Only Hakha is left to not harm the SAC’s administrative mechanisms. The rest towns are all shut down,” saidaChin local.
Among the cut-off townships, Sagaing townships are most frequently raided. In addition to raids, houses are burnt and local residents are escaping leaving their homes.
According to news MPA has learned, even though the internet has been cut off in Hpakant, Mytel SIM cards still work for the internet and in some areas, they are still used.
Regarding the internet shutdown, the terrorist SAC’s spokesperson Zaw Min Tun was contacted through all the operators by phone, but the calls were not answered.
Since, the internet shutdown areas are where clashes are ongoing, it is difficult to obtain news of the military raids and support activities have also become difficult, according to local rescue group.
“Now, communication is very difficult. In Thantlang, it’s hard to get news of the villages. There are some donation help by other countries for IDPs, but it has become very difficult due to the internet shutdown,” saidaThantlang Placement Affairs Committee (TPAC) official.
In Myanmar, the terrorist military has often carried out the four-cut strategy – cutting food supplies, communication, arm support and financial means – to heighten the clashes.
#InternetShutdown #TerroristMilitary #MPA
မိုးဗြဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့ တိုက်ပွဲဖြစ်
သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရ အရာရှိဟောင်း ဦးဇော်ဌေး (မှူးဇော်) ကွယ်လွန်
YUA ၏ လှုပ်ရှားမှုများ ပြည်သူ့ထံ မကြာခင်ချပြသွားမည်
ပုလောပြည်သူအချို့ကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက ဖမ်းဆီးပြီး PDF နှင့် ဆက်နွယ်ကြောင်း အတင်းဝန်ခံခိုင်း
ဥရောပနိုင်ငံများနှင့် အနောက်နိုင်ငံများတွင် NUG အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် ရုံးခွဲများ ဆက်ဖွင့်ဦးမည်
NUCC တွင် NLD ကိုယ်စားပြုမှု မပါဝင်ဘဲ မိတ်ဖက် ဆက်ဆံရေးအဖြစ်သာ ရပ်တည်တော့မည်